Qaabka Saddexda Askari Waa Mid Ka Mid Ah Calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah loo furi karo | vfxAlert official blog
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah waa mid fudud: Qaabka Saddex Askari
Muuqaalka shaxda qiimaha ee tirooyinka dib u noqoshada (qaababka) falanqaynta laambadda ayaa ah mid ka mid ah calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u wanaagsan ee lagu furayo macaamil ganacsi. Isbeddelku lama xaqiijin oo keliya laakiin sidoo kale waa bilowga hore, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in heshiiska lagu sii haysto muddo dheer oo aan ku koobnayn oo keliya kuwa waayeelka ah laakiin sidoo kale waqtiyada yar yar. Aynu eegno mid ka mid ah qaababka dib-u-noqoshada ee lagu kalsoon yahay - "Saddex askari" .
Ku saabsan falanqaynta laambadda
Qiimaha (shumaca) waxaa ku jira dhammaan waxyaabaha saameeya; looma baahna falanqeyn dheeraad ah (mid ka mid ah mabaadi'da Dow Theory).
Taariikhdu way soo noqnoqotaa iyadoo la kaashanayo qaababka garaafka, waa suurtagal in la saadaaliyo ficilada inta badan ciyaartooyda saamileyda ah (Eder's Chaos Theory, Elliott's wave wave).
Mugga maqaalka ma oggolaan doono inaan si faahfaahsan u sharaxno dhammaan qaababka shumaca; waxaan sifiican uheleynaa kaliya kuwa ugu fudud isla markaana isla markaa ah tirooyin adag. Isla markiiba waa loo isticmaali karaa xitaa ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay newbie's .
Qaabkan waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa istiraatiijiyadda Waxqabadka Qiimaha, halkaasoo ay sii xaqiijineyso koror xoog leh ama hoos u dhac ku yimaada mugga suuqa, laakiin waxaa loo isticmaali karaa gebi ahaanba keligiis.
Aan si dhakhso leh u qeexno eraybixinta: falanqaynta laambadda caadiga ah, tusaalaha 'bulish' (kor u kaca) waxaa loo yaqaan " Saddex Askari oo Cadaan ah ", iyo kan ka soo horjeedka ah (soo degaya) " Saddex Black Crows ". Sidoo kale suugaanta Qiimaha Waxqabadka, gabal dhaca ayaa loogu yeeri karaa " Saddex Askari oo Madow ah ."
Natiijooyinka ugu xasilloon ee binaries waa istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saabsan dhammaan lamaanayaasha is-bedbeddelaya, sida EUR / USD ama USD / JPY Waxaad sidoo kale ku ganacsan kartaa iskutallaabyada, marka laga reebo lammaanaha leh yen. Waqtiyada kala wareegga, waxaan u hoggaansameynaa mabda'a caadiga ah ee "da 'weyn, lagu kalsoonaan karo iyo calaamadda". Inta lagu jiro wararka xilliyada, waxaan ka joognaa suuqa!
Mabda'a qaabeynta qaabku waa mid fudud:
Marka loo eego isbeddelka culeyska, seddex shumac oo kor u kacaya ayaa si isdaba joog ah u muuqda: waxaan heysanaa " Saddex Askari oo Cadaan ah " oo waxaan furanaa xulashada CALL-ka;
Saddex shumacyo oo isdaba-joog ah oo ka soo degaya dusha sare ee kor u kaca - " Saddexda Tawxood ee dhacaya" oo fur furaha 'PUT-option';
Hooska shumaca oo gaaban ama maqan.
Markaad ku ganacsaneyso calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah, xusuusnow: haddii ugu yaraan mid ka mid ah saddexda shumac uu midab kale yahay, shaxanka waxaa loo arkaa mid aan dhameystirneyn, waxaana sugeynaa calaamadda xigta !
Moodooyinka muuqaalka ah ee caadiga ah ee qiimaha Furan uu ka hooseeyo Meesha u Dhow (u Dhaw) qaab ahaan kor u kaca, uguna hooseeya hoos u dhaca. Fasaxyada noocan oo kale ah ama "nusqaamaha" ayaa caan ku ah suuqyada wax kala iibsiga iyo alaabada. Suuqa lacagta Forex, inta badan, heerarka furitaanka / xiritaanka waa isku mid:
Tusaalaha lamaanaha lacagta Forex:
Si loo furo ganacsi, shuruudaha soo socda waa in la buuxiyo:
Noocyada oo dhami waxay muujinayaan oo keliya bilowga isbeddelka isbeddellada, in kasta oo tirakoobyada wanaagsan ee la adeegsanayaa, haddana ma noqon karaan xaqiijinta ugu dambeysa ee sii socoshada isbeddellada cusub. U adeegso tilmaamahan farsamo ee dheeriga ah ama ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , sida vfxAlert;
Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka waa inuu ka horreeyaa isbeddel xoog leh ama muddo dheer oo isukeenis ah;
Haddii qiimaha furitaanka iyo xiritaanka ay ka duwan yihiin, ku dhowaanshaha bartamaha shumaca hore ayaa furay "askari" ama "tuke" ayaa calaamadda sii xoogeysanaya;
Shumaca labaad iyo kan seddexaad waa inuu noqdaa mid isku mid ah baaxadda, sida jirka, sidaas iyo hooska. Haddii kale, waxaa fiican in laga boodo calaamadda;
Markaad u guureyso jadwalka xiga ee xiga, dhammaan saddexda laambadood waxay isku milmaan mid kor u kacaya ama soo degaya.
Waqtiga dhicitaanka waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo waqtiga loo adeegsaday, waxaa lagugula talinayaa inaad ku doorato qiyamka 5-7 baararka inta u dhexeysa illaa M30, iyo 10-15 laga bilaabo H1 iyo wixii ka sareeya;
Haddii aad tiriso dhicitaanka, eeg inta shumacyo celcelis ahaan illaa max / min ugu dambeeya ee maxalliga ah. Xusuusnow in aan furno ganacsi ku saabsan isbeddel socon kara muddo dheer. Ma fiicnaan doonto haddii uu xirmo bilowga sababtoo ah "dhicitaanka" dhicitaankiisa.
Istaraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh qaab iyo tilmaamayaal farsamo leh
Sida xaqiijin dheeraad ah ee calaamadaha saddexda shumac, waxaan u adeegsanaa:
Muujiyeyaasha mugga, oo ay ku jiraan kuwa shilinta . Labada tirooyinba waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa farsamada VSA (falanqaynta faafitaanka mugga). Kordhin fiiqan oo mugga isku mar ah oo leh muuqaalka shumaca waxay muujineysaa xiisaha xooggan ee suuqa si loo beddelo isbeddelka hadda jira;
Tilmaamayaasha isbeddelka iyo oscillators of overbought / oversold . Xulashada ugu fiican ee bilowgu waa in lagu dejiyo celceliska dhaqaajinta shaxanka, tusaale ahaan, muddo 200 iyo 120, iyo MACD ama Stochastic oscillator waxaadna heleysaa istiraatiijiyad isbeddel lagu kalsoonaan karo, labadaba falanqaynta farsamada iyo laambadda;
Ku beddel isbeddel . Halkan, kooxda Bollinger waa tartan la'aan - waxaan ka galnaa suuqa isgoyska khadka dhexe ama burburka xuduudaha ka dib muddo xoojin ah.
Jirka shumaca . Haddii ay jiraan meydad dhaadheer xitaa hal shamac, aad u taxaddar - xaaladaha badankood, tani waxay ka dhigan tahay in qiimaha uu kor u kacay ama aad hoos ugu dhacay sababo la xiriira falalka mala awaalka ee ciyaartoyda waaweyn, mana jirin wax isbeddel dhab ah oo ku yimid dheelitirka awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha.
Shumacyo yaryar oo leh hoos dheer . Haddii labada hoos ee kan labaad iyo gaar ahaan laambadda saddexaad ay ka siman yihiin ama aad uga dheer yihiin jirka (xusuusin ah "Doji" ama "xiddig"), waxaa lagu talinayaa in la sugo calaamadaha xiga.
Iibsadayaasha / iibiyayaashu wali ma haystaan awood ku filan oo ay ku badalaan isbedelka, falanqaynta laambadda, xaaladaha noocaas ah waxaa loo fasiray sidan soo socota: qaabku wuxuu isu badalayaa "Weerar la diiday" hadii shumaca labaad uu leeyahay muuqaal isku mid ah ama "Slowdown" "Bareeg") oo kaliya shumaca saddexaad:
Hoos ma jiro . Ha ku sugin shumacyo qaabka leh hooskii oo dhammaystiran. Calaamadaha noocan oo kale ah ee xaqiijinta isbeddelku aad ayey u yar yihiin waxaadna seegi kartaa meelo badan oo laga soo galo oo wanaagsan.
Markaad baraneyso sababta calaamadaha ikhtiyaariga ah ay u shaqeeyaan , xusuusnow in aragtida falanqaynta laambaddu had iyo jeer noqon doonto mid shaqsiyeed. Haddii hal ganacsade uusan arkin qaabka, mid kale ayaa laga yaabaa inuu helo meel laga soo galo oo wanaagsan.